Waxgaradka degmada Burtinle oo dhaliilay Faarax Maxamuud Jaamac, iyo gudoomiyaha oo beeniyay eedahaas. – Radio Daljir
Diseembar 22, 2012 2:57 b 0
Burtinle, Dec, 22- Waxgaradka degmada Burtinle ee gobolka Nugaal ayaa eedeyn iyo dhaliilo u soo jeediyay gudoomiyaha degmada Faarax Maxamuud Jaamac (Salwe).
Eedaha oo qaarkood ay ka soo yeerayaan xubno ka tirsan maamulka iyo qaar horay ula soo shaqeeyay ayaa sheegay inay jiraan wada shaqayn la’aan ka dhex jirta hay’adihii maamulka ee degmada, taasoo sida ay sheegeen ay dheertahay dayacnaan dhanka bilicda degmada iyo nadaafad darro jirta.
Saalax Axmed Guure oo horay oga mid ahaa xubnihii golaha deegaanka degmada ayaa radio daljir u sheegay inay dhawr jeer iska soo daba laabteen dacwooyin iyo isqabsi xubnaha maamulka taasna mashquulkeeda laga dareemay xarunta gobolka ee Garoowe ahna magaalo madaxda Puntland ee Garoowe.
Dhanka kale gudoomiyaha degmadda Burtinle Faarax Maxamuud Jaamac oo isaguna waraysi siiyay daljir ayaa beeniyay eedaha loo soo jeediyay, waxaana taa badalkeeda uu carabaabay inay degmada ka qabteen barnaamijyo hormarineed oo aad u fara badan kuwo kalana ay hada ku hawlan yihiin qabashadooda.
Dhawaan ayay ahayd kolkii ay soo baxeen dhaleecayno iyo dhaliilo loo soo jeediyay gudoomiye Salwe, sidoo kale ay mar jirtay inuu shaqo fariisin ku sameeyay xog-hayaha dawladda hoose, balse hada shaqadiisa dib u billaabay, sida uu gudoomiyaha inoo sheegay.
Degmada Burtinle ayaa ah degmada labaad ee ugu weyn gobolka Nugaal waxaana soo maray dhawr maamul oo isaga kala danbeeyay.